Goolhaye Thibaut Courtois Oo Ku Biiray Liiska 45 Ciyaartoy Oo Ka Soo Wada Ciyaaray Kooxaha Madrid Ka Dhisan Ee Real Madrid & Atletico Madrid Iyo Magacyo Aanad Rumaysan Karin Oo Labada Kooxood Isku Soo Maray. - GOOL24.NET
Goolhaye Thibaut Courtois Oo Ku Biiray Liiska 45 Ciyaartoy Oo Ka Soo Wada Ciyaaray Kooxaha Madrid Ka Dhisan Ee Real Madrid & Atletico Madrid Iyo Magacyo Aanad Rumaysan Karin Oo Labada Kooxood Isku Soo Maray.
August 9, 2018 Mahamoud Batalaale
Kooxda Real Madrid ayaa xalay ku dhawaaqday in ay Chelsea kala soo wareegtay goolhayaha ree Belgium ee Thibaut Courtois kaas oo sabab u noqotay in Blues ay rekoodhkii suuqa kala iibsiga goolhayayaasha u jabisay saxiixa Kepa oo ay Atheltic Bilbao kagala soo wareegtay 80 milyan euros isla markaana ay Kovacic heshiis amaah ah ugula wareegtay Real Madrid.
Goolhaye Thibaut Courtois ayaa Chelsea ku qasbay in ay iska iibiyaan kadib markii uu ka soo muuqan waayay tababarkii uu Sarri bixiyay iyada oo waliba heshiiskiisa Stamford Bridge uu dhacayay dhamaadka xili ciyaareedka cusub laakiin in Real Madrid uu ku soo biiray waxay ka dhigan tahay in uu noqday xidigii 45 aad ee kooxaha Madrid ka dhisan ee Atletico Madrid iyo Real Madrid ka soo wada tirsanaa.
Xidigo magac wayn ku soo yeeshay labada kooxood oo qaarkood aanad u qaadan karin in ay labada kooxood isku soo mareen ayuu goolhaye Thibaut Courtois ku biiray. Goolhaye Thibaut Courtois ayaa laba sano ku soo qaatay kooxda Atletico Madrid kuwaas oo ahaa sanadihii waayihiisa ciyaareed heerka cusub u qaaday wuxuuna kadib ku laabtay Chelsea oo uu amaah kaga soo maqnaa.
Caadiyan waxaa iska adag in ciyaartoy ay u kala wareegto kooxaha Real Madrid iyo Atletico Madrid, haddana waxaa jira siyaabo kala duwan oo ay xidigo iskaga gudbaan labada kooxood inkasta oo Real Madrid ay sanadkii hore Theo Hernandez ku jabisay dhaqankii labada kooxood kadib markii ay si toos ah u bixisay lacagtii heshiiskiisa lagu burburin karayay.
Ciyaartoygii ugu horeeyay ee Atletico Madrid ah oo u gudbay dhinaca kooxda ay xifiltamaan ee Real Madrid waxa uu ahaa Joaquin Carucho Astray kaas oo qaybta cad cadka Madrid ku biiray sanadkii 1916 kii laakiin waxaa kadib labada kooxood u wada ciyaaray xidigo ay ka mid yihiin Jose Maria Cabo, Jaime Lazcano iyo Andres Ariestegui.
Laakiin Courtois ayaa noqday goolhayihii 7 aad ee u soo wada ciyaaray kooxaha Real Madrid iyo Atletico Madrid laakiin waxaa jira ciyaartoy aan inta badan la ogayn in ay labada kooxood soo wada mareen. Tusaale ahaan Sual Niguez oo ka mid ah xidigaha ugu hibada fiican Atletico Madrid waxa uu ka soo baxay xarunta da’yarta Madrid waxaana loo arkayay mid aan tayo fiican lahayn inkasta oo uu Estadio Vicente Calderon si layaableh iskugu muujiyay.
Alvaro Morata ayaa isna hore u soo maray kooxda Atletico Madrid intii aanu si buuxda indhaha caalamka ugu qaban Real Madrid laakiin xidiga ugu muhiimsan ee soo maray labada kooxood ee Real Madrid iyo Atletico Madrid ayaa ah Raul Gonzalez kaas oo markii danbe noqday halyayada Los Blancos loogu jecel yahay.
Rual ayaa ka soo baxay xarunta da’yarta Atletico Madrid laakiin waxay fahmi kari waayeen hiyadiisii iyo tayadiisa wuxuuna ku biiray Real Madrid si uu u noqdo xidigii abid goolasha ugu badan u soo dhalyay ilaa intii uu Ronaldo rekoodhkiisa jabinayay.
Laakiin Courtois ayaa noqday xidigii labaad oo kaliya ee ree Belgium ay ee isku maray kooxaha caasimada Madrid ka dhisan waxaana uga horeeyay Fernand Goyvaerts kaas oo soo wada xidhay maaliyadaha Atletico Madrid iyo Real Madrid wuxuuna guud ahaan Courtois noqday xidigii 45 aad ee labada kooxood isku soo maray.